Daaweynta hurdo la'aanta dabiiciga ah ee la xaqiijiyay inay waxtar u leedahay nasashada habeen wanaagsan
Hadaad raadineyso midka ugufiican dabiiciga daawo u ah hurdo la’aanta, markaa waxaad timid meesha saxda ah. Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa waxyaabo badan oo ku saabsan dhirta dabiiciga ah, cunsurrada, iyo walxaha ka caawin kara sababaha hurdo la'aanta waxayna sababi karaan hurdo fiican oo habeen iyo maalinba laga yareeyo dhammaan dhibaatooyinka soo raaca. Tusaalooyinka wanaagsan ee daaweynta ugu caansan guriga ee hurdo la’aanta waa malab, kaalshiyam, iyo cambaare. Baro sida dhirtaan dabiiciga ah iyo cunsurrada ay ku caawin karaan.
Malabka ayaa la rumeysan yahay inuu leeyahay awood uu kor ugu qaadi karo hurdo wanaagsan habeenkii. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa laba qaado oo malab saafi ah oo lagu daray koob biyo ah. Cab xalka waana inaad awood u yeelatid inaad jirkaaga geliso xaalad wanaagsan oo nasasho ah. Qaad tan daqiiqado yar ka hor wakhtiga jiifka waxaadna awoodi doontaa inaad hurdo fiican seexato habeenka oo dhan. Waxaad sidoo kale malab ku dari kartaa koob kasta oo shaah ah oo diiran. Isku day inaad diyaarsato shaah sariirta lagu seexdo oo ka kooban geedo dabiici ah sida kava kava, root valerian, catnip, iyo chamomile. Dhirtaas hurdo la'aanta ahi waa inay sameeyaan khiyaanada.
Daaweynta hurdo la'aanta ugu waxtarka badan ee guriga waa inay ahaataa caano. Galaas diiran oo caano ah ayaa loo arkaa inay waxtar leedahay ugu horreyn sababta oo ah waxay ka kooban tahay kaalshiyam. Kaalshiyamku waa hal macdan oo kala habeyn kara howlaha nidaamka neerfaha. Sidan oo kale, waxay awood u yeelan kartaa maskaxda inay nasato oo ay hurdo la'aan ku seexato. Qiyaastii 1,000 mg oo Kaalshiyam ah ayaa badanaa looga baahan yahay bukaannada hurdo la'aanta ah. Haddii aadan u dulqaadanayn laktoos, waxaad dooran kartaa kaalshiyamka nafaqada leh ee lagu iibiyo farmasiyada halkii. Kalsiyum oo daawo dabiici ah u ah hurdo la’aanta ayaa loo isticmaali jiray da ’ahaan.
Chamomile waa geedo kaa caawin kara kor u qaadida hurdada wanaagsan ee habeenkii. Waana mid si gaar ah awood u leh marka lagu daro saliida lavender. Chamomile waxaa laga samayn karaa shaah diirran. Waxa kale oo aad ku diyaarin kartaa qubeys diirran oo leh chamomile iyo saliidda lavender. Ku qoy dhexdeeda illaa jirkaaga oo dhan ka dabco. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad hurdo la'aan habeenkii seexato. Waxa kale oo aad barkintaada ku ridi kartaa dhowr dhibcood oo ah lavender iyo chamomile oil. Udugga labadan saliid waxaa lagu yaqaan inuu dhaliyo hurdo nasasho leh.
Daaweynta dabiiciga ah ee hurdo la'aanta ayaa si aad ah looga door bidaa daawooyinka hurdo la'aanta maalmahan. Tani waa sababta oo ah xaqiiqda ah in aysan soo saarin wax saameyn ah oo liddi ku ah qofka isticmaala. Sidaa darteed haddii aad rabto daaweyn wax ku ool ah oo laga jaro dhammaan dhibaatooyinka caafimaad, waxaa fiican inaad isku daydo daawooyinkan guriga. Eeg haddii ay si qurux badan kuugu shaqeyn doonaan.
sida loo daaweeyo hurdo la’aanta, hurdo la’aanta daawo, hurdo la’aanta ayaa daaweysa